Fanadinam-panjakana :: Niakatra ho 10/20 ny tahan’ny naoty nanivanana an’ireo afaka bakalôrea • AoRaha
Fanadinam-panjakana Niakatra ho 10/20 ny tahan’ny naoty nanivanana an’ireo afaka bakalôrea
Folo amin’ny roa­polo. Io no naoty farany ambany no­tapahin’ireo mpampianatra mpitsara ny Bakalôrea fa hahazoan’ireo mpiadina an’io diplaoma io ho amin’ity taona 2019 ity raha “9,75” izany tamin’ny taon-dasa, araka ny fanazavan’ireo mpitsara ny fana­dinana.
Ny fisian’ny fanadinana Bakalôrea fihodinana faharoa manokana no voalaza fa antony nampiakarana an’io naoty sivana io. Tsy misy fandefe­rana fa tsy afaka avy hatrany izay tsy nahazo an’io salan’ isa io “Afa-panadinana avokoa izay mahazo salan’isa 10/20. Mbola manana fotoana hahafahana mamerina amin’ ny fihodinana faharoa manokana ireo izay tsy afaka”, hoy ny profesora Blanche Nirina Richard, minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fika­rohana ara-tsiansa, omaly. Fotoana fohy no nidiran’ireo mpampianatra tao amin’ny efitrano dia nivoaka io isa io.
Tsy nisy fiovana betsaka ny taham-pahafahan’ireo mpianatra afaka Bakalôrea hoy ny filazan’ireo mpa­mpi­anatra nitsara ny fanadinana. Voalazan’izy ireo fa: “mano­didina ny 40% ny taham-pahafahana ho an’ny fampianarana ankapobeny. Nahatratra 44,67% ny an’ny sokajy A1. Miisa 39,49% ireo afaka tamin’ny sokajy A2,36,37% ho an’ny sokajy C , ary nahatratra 43,01% ny an’ny sokajy D”. “Ireo aloha no novakiana tami­nay tao anatin’ilay efi-trano nanaovana ny “déliberation”. Tsy nahalala izay mety ho fiovany anefa izahay”, hoy ny mpampianatra taranja Tantara sy Jeografia iray. Tsy nanamafy an’ireo isa ireo kosa ny filohan’ny mpitsara ny fanadinana Bakalôrea. “ Tsy azoko atao ny manambara ny taham-pahafahana ofisialy. Mifanahantsahana amin’ny taha teo aloha ihany anefa izany fa tsy araka ny niheveran’ny olona azy hoe ambony be satria nisy fivoahan’ny laza adina”, hoy Rasoloarimanana Jérôme .
Boriborintany fahaenina :: Mitaky tohana amin’ny kandidà Andriantsitohaina Naina ireo tantsaha